Ibhodi yeBillboard Mockup | Abadali be-Intanethi
Khawucinge ukuba umxhasi ufika kwaye akucele ukuba uyile umfanekiso omele inkampani yakho kuba uza kupapashwa kwiibhodi zebhodi (ewe, ezo siqhele ukuzibona xa siqhuba). Uyila ngokusekelwe kubukhulu, into ayifunayo kwaye xa uyinikezela kuye uhlala ebanda. Ngaba uyazi ukuba kutheni? Kuba awusebenzisanga umfanekiso webhilibhodi, oko kukuthi, uyinike uyilo kodwa hayi ukukwazi ukubona ukuba iya kujongeka njani kwibhilibhodi yokwenyani.
Y nantso into esiyiphumezayo ngeebhilibhodi mockups, ukunika inyani uyilo lwakho kwaye ufumane umthengi umbono wokuba iya kujongeka njani xa ibekwe kolu cingo. Kodwa uyenza njani loo nto?
2 Yintoni ekufuneka uyigcine engqondweni xa usenza uyilo lwebhilibhodi
3 Ungawufumana phi umfanekiso webhodi yebhilibhodi
3.1 I-Skyboard Billboard Mockup
3.2 Jonga ukusuka ngezantsi
3.3 ibhodi yebhodi yendlela enkulu
3.4 Ukukrolwa kocingo kwisakhiwo
3.5 Ukuthelekisa iMockup
3.6 Imboniso yocingo lwangaphandle
Ukuza kuthi ga ngoku, kusenokwenzeka ukuba sele unombono wokuba kuthetha ukuthini i-mockup. Kodwa ukwenza kucace ngakumbi, siya kukuxelela ukuba sithetha ngokumelwa ngokuthembekileyo kangangoko kunokwenzeka kwinyani malunga noyilo. Kwimeko ye-billboard Mockup, siza kuthetha ngemifanekiso yeebhilibhodi apho, endaweni yentengiso eqhelekileyo, siza kubamba uyilo esilwenzileyo ukuze umxhasi aqonde ukuba kuya kubonakala njani kunye nokungaphumeleli okunokwenzeka okanye iimpazamo ezimele zibe. kuphetshwe.. Ngokomzekelo, imithi egubungela iindawo ezithile zoyilo, iindawo ezikhanyiswe kakubi, njl.
Ngandlela thile, iimockups zisinceda ukuba sibonise uyilo olunethuba elikhulu lokuphumelela kumxhasi (kuba awuniki uyilo ngokwalo, kodwa umboniso wendlela ekuya kujongeka ngayo); kwangaxeshanye, inceda abaqulunqi ukuba baphelise naziphi na iingxaki ezinokuvela (ezo sele sixubushe ngazo) kunye nokubonisa iinketho zakudala kunye nezinye ezinokutsala ingqalelo enkulu.
Ukunika inyani kolu yilo lusuka kwiscreen phantse luye kubomi bokwenyani, ngakumbi ukuba abathengi bayakuxelela ukuba bazakubeka phi ibhilibhodi kwaye ungathatha ifoto yayo.
Yintoni ekufuneka uyigcine engqondweni xa usenza uyilo lwebhilibhodi
Nangona uyilo lwentengiso kufuneka luhlangabezane neemfuno ezifanayo, ezikukubhengeza imveliso, Kwimeko yeebhilibhodi, kuba zikhulu kwaye zinokubonwa ukusuka kumgama omkhulu, kufuneka uqaphele kakhulu ngeenkcukacha.
Enyanisweni, kufuneka ubeke kwindawo ebonakalayo ngokwaneleyo (kwaye apho amehlo abo bayibonayo baya kuhamba) ukutsala ingqalelo. Kungenjalo, ayizukwenza nto ilungileyo. Kwakhona akufanelekanga ukubeka izinto ezininzi kuyilo, kuba ingqalelo yaloo mntu iya kulahleka.
Ekugqibeleni, ubungakanani kufuneka buthathelwe ingqalelo. Kungcono ukugqamisa imveliso, ibinzana kwizinto enye okanye ezimbini kunesethi yonke ngokwayo.
Ungawufumana phi umfanekiso webhodi yebhilibhodi
Kuba sisazi ukuba awuzusoloko ukwazi ukubanayo ifoto yebhilibhodi abaza kuyibhengeza kuyo, ayisiyonto ibuhlungu ukuba nezinye iinketho zebhilibhodi yebhilibhodi. ungu Baya kunceda ukunika ukuhambelana ngakumbi kuyilo lwakho. Kodwa zifumaneka phi?
Uneendlela ezimbini ongakhetha kuzo: simahla, apho kukho umda ongaphezulu; kwaye ihlawulwe, enokubiza ukusuka kwixabiso eliphantsi kakhulu ukuya kwabanye esinokucebisa kuphela ukuba ngokwenene unabathengi bolu hlobo rhoqo, kuba utyalo-mali alunambuyekezo.
Apha sikushiyela ezinye zezo siye saziqwalasela ezinokukusebenzela.
I-Skyboard Billboard Mockup
Siqala ngoyilo Iza kusikhumbuza ezo bhodi zentengiso zivela kwimiboniso bhanyabhanya yezemidlalo apho zikhangeleka zizinkulu. Ewe, into efanayo yile nto sifuna ukuba yenzeke, ukuba umxhasi abone ukuyila kwakhe kwaye acinge ngendawo aza kuyibeka kuyo, ukuba iya kujongeka njani.
Ungayikhuphela simahla apha.
Jonga ukusuka ngezantsi
Nantsi enye umfanekiso webhodi yebhilibhodi onokuthi ufumane uluvo ngayo kuba ikwakunika imilinganiselo eyiyo yebhilibhodi.
Unayo imbono ukusuka ezantsi, ngcono uthe, ukusuka embindini kuba ngokuqinisekileyo iya kuba phezulu kakhulu kunefoto oza kuyibona.
ibhodi yebhodi yendlela enkulu
Ukuba ufuna ukuba nembono eyahlukileyo, kwaye gxila kwezo bhodi zebhodi uzibona ezindleleni, emva koko kufuneka uzame le ikunika umbono owahlukileyo.
Ukukrolwa kocingo kwisakhiwo
Kwizixeko ezininzi, ingakumbi ezinkulu, banazo izakhiwo ezizirentayo ukuze zibeke iibhanile kuzo ukuze zitsale umdla kubantu abakude (ngokuqhelekileyo kwizakhiwo ezijongene nohola wendlela, oohola bendlela, njl.njl.) kwaye kunjalo, umzekelo woko ngulo mockup.
Kuthekani ukuba bakucela uyilo kwiiseyile ezimbini? Koko kukuthi, iibhodi ezimbini ezingenelayo (Umzekelo, ukuba komnye kukho umbuzo kwaye kwenye impendulo. Ewe, unokuphinda ubonise oko kubo, nakumfanekiso ofanayo.
Ziyakwazi ukwenzeka kwaye ungahlela iseti ukuyiqhelanisa nale nto ufuna ukuyibonisa kumxhasi wakho.
Imboniso yocingo lwangaphandle
Omnye umzekelo onokuwusebenzisa ukubonisa abathengi yile mockup yocingo. Ngaye unokumnika enye imbono eyahlukileyo.
Ngesi sihlandlo asicebisi enye, kodwa ukhetho lwabo kuba siye sadibana I-Pinterest enengqokelela yeebhilibhodi zoyilo olwahlukileyo ukuze ufumane oyena uthanda kakhulu.
Uninzi lwazo ngamanqaku kwaye ungawalandela ukuze ukhuphele iifayile ezithile.
Apha sikushiya unxibelelwano oko sikufumeneyo.
Ukuba ubrawuza i-Intanethi kancinane unokufumana imizekelo emininzi ngakumbi kwaye zizixhobo ezinokuza luncedo. Ke ukuba ungumyili okanye ujongana nale projekthi ngasihlandlo sithile, baya kuza beluncedo xa kufikwa ekuboniseni uyilo lwakho kumxhasi, unike uchuku oluyinyani. Ngaba uyazi enye into oyicebisayo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Umfanekiso webhodi yeebhilibhodi